Imiba Ukwaziswa kwabaThengi
Kwiintsuku ezingama-30 ukuya kwi-45, iinyanga eziliqela ziqhelekileyo
I-IRS ngoku iqhuba ininzi yophicotho lwabo bentlawulo ngeeposi. Yiyo iindaba ezilungileyo. Iindaba ezimbi, iingxelo ze- Ofisi ye-Accountability Account (i-GAO) kukuba i-IRS idukisa abahlawuli berhafu abaphicothiweyo ngokubanika amaxesha angenangqiqo ngexesha eliya kuphendulwa kuyo.
Ngokutsho kophando lwe-GAO , izaziso zophicotho-zincwadi zithembisa abahlawuli berhafu ukuba i-IRS iphendule i-correspondence kubo "ngaphakathi kweentsuku ezingama-30 ukuya kwii-45," xa ngokwenene ithatha i-IRS "inyanga eziliqela" ukuphendula.
Ukuncipha okufana nokugqithisa ngokugqithisileyo umfanekiso we-IRS kunye nokuthembela komntu, xa engenzi nto ukuvala i- gap yentela yesizwe, eqhuba iirhafu kubo bonke abantu baseMerika.
Kwakhona Khangela: Usizo lwe-IRS evela kwiNkonzo yeNkonzo yokuThengisa umThengi
I-GAO ifumene ukuba ekuqaleni kuka-2014, idatha ye-IRS ibonise ukuba ayiphumelelanga ukuphendula kwisithuba seentsuku ezingama-30 ukuya kwi-45 ezithembisiwe ukuya kwisigqibo seenkcukacha kubathengi abathengiweyo. Amaxesha amaninzi, ukubuyiselwa kwemali akukhange kwagqitywa de ukuphicothwa kophicotho.
Ubangela ii-Call They Just Can Not Answer
Xa abaphandi be-GAO baviwa, abahloli beerhafu be-IRS bathi izimpendulo ezilibaziseko zenza ukuba "umrhafi werhafu" kunye ne-raft ye "engadingekile" imbizo kwi-IRS kubarhafi berhafu. Eminye ingxaki, abahloli beerhafu abaphendula abo babizwa ngokuba yiingcingo ezingadingekile bathi abayi kuphendula abahlawuli berhafu, kuba bengenayo ingqiqo xa i-IRS iphendule iileta zabo.
"Abahlawuli berhafu abakwazi ukuqonda ukuba kutheni i-IRS ingathumela iileta kunye namaxesha angenangqiqo kwaye akukho ndlela eyamkelekileyo esinokuyichazela yona," omnye umhloli weerhafu wathi ku-GAO.
"Kungenxa yoko badidekile. Usibeka kwisimo esibuhlungu kunye neentloni .... Ndizama ukulawula imeko kwaye ndixelele umhlawuli-ntlawulo Ndiyaqonda ukukhungatheka ukuze azincipheke ukuze sikwazi ukwenza umnxeba uvelise, kodwa oku kuthatha ixesha kunye nokuchitha ixesha lokuba bobabini berhafu. "
Imibuzo ye-GAO ye-IRS ayikwazanga ukuphendula
I-IRS yatshintshile kwi-audited-face to face, i-audited-audit-audit-audit-based audits ngo-2012 kunye nokuphunyezwa kweProjekthi yoVavanyo yoHlolo lweeNcwadana (i-CEAP) ebiza ukuba iya kunciphisa umthwalo wabathengi.
Iminyaka emibini kamva, i-GAO ifumene ukuba i-IRS ayinalo ulwazi olubonisa indlela okanye ukuba inkqubo ye-CEAP yayichaphazele umthwalo werhafu, ukuthotyelwa kokuqokelela irhafu okanye iindleko zayo zokuqhuba uphicotho.
I-GAO ithi: "Ngaloo ndlela, akunakwenzeka ukuxelela ukuba inkqubo iyaqhuba kangcono okanye iyingozi nakweyonyaka ukuya kutsho."
Kwakhona Qaphela: Iingcebiso ezi-5 zokubuyiswa kweRhafu ngokukhawuleza
Ukongeza, i-GAO ifumene ukuba i-IRS ayizange ifake izikhokelo malunga nendlela abaphathi bayo kufuneka basebenzise ngayo inkqubo ye-CEAP yokwenza izigqibo. "Ngokomzekelo, ii-IRS azizange zilandele iinkcukacha kwinani lamaxesha ehlawula irhafu ebizwa ngokuba yi-IRS okanye amaxwebhu athunyelwe," kubike i-GAO. "Ukusebenzisa imida engaphelelanga yolwazi malunga neengeniso ezongezelelweyo ezifunyenwe kwii-intanethi zophicotho-zincwadi ze-IRS kunye nokuba bunzima bunjani ukuphicothwa kwemali kubangele abakhokhi berhafu."
I-IRS isebenza Kuyo, kodwa
Ngokwe-GAO, i-IRS yenze iprogram ye-CEAP esekelwe kwiinkalo ezintlanu iingxaki eziye zachonga ukubandakanya ukunxibelelana nabahlawuli berhafu, inkqubo yokuphicothwa kwemali, ukukhawuleza isisombululo sophicotho-mali, ukulungelelaniswa kwezixhobo, kunye neenkqubo zemitha.
Kwanje, abaphathi beprojekthi ye-CEAP banemizamo yokuphuculwa kweenkqubo ezili-19 ezigqityiweyo okanye eziqhubekayo. Nangona kunjalo, i-GAO ifumene ukuba i-IRS ayikwazanga ukuchaza okanye ukulandelelanisa iinjongo ezijoliswe kwiinjongo zokuphucula inkqubo. "Ngenxa yoko," kutsho i-GAO, "kuya kuba nzima ukunquma ukuba iinjongo zijongene ngempumelelo neengxaki."
Umcebisi weqela lesithathu oqeshwe yi-IRS ukufundisisa inkqubo ye-CEAP yanconywe ukuba i-IRS idale "isixhobo" seenkqubo zokulinganisela iinkqubo phakathi kokusingatha iifowuni ezivela kubathengi abaphicothiweyo kunye nokuphendula kwincwadi evela kubo.
Kwakhona Uyabona: I- IRS Ekugqibeleni iyakwamukela iBhili yeLungelo lamaTyala
Ngokutsho kwe-GAO, izikhulu ze-IRS zathi ngelixa 'ziza kucinga' iingcebiso, zazingenaso izicwangciso malunga nokuba njani okanye nini.
Ngako oko, kuya kuba nzima ukubamba abaphathi be-IRS abaxanduva lokuqinisekisa ukuba iingcebiso zigqityiwe ngexesha elifanelekileyo, "kuchaza i-GAO.
Ubani Owenza Imini Yobusuku Igcine ixesha?
I-Post Service Ilahlekelwa Ngonyaka
I-FTC Isexwayisa yeevelopments Scheffing Schemes
Ngaba Kuphela NgoMgqibelo Ukuthunyelwa Kwemiyalezo Enjalo Ingqondo Efanelekileyo?
Kwathatha ixesha, kodwa 'iMidget' Raisin ayikho
Indlela yokusebenzisa i-USPS yokuThumela iNkonzo yeeNkonzo
Iposi yeeposi ifuna ukunikezela ngemali ye-Payday
URhulumente ulahlekelwa yimali yokwenza i-Nickels kunye nePennies
Ngokuphathelele i-US Postal Service
IiNkonzo zeePaki zeSizwe 'zididekile kwiNqanaba ngalinye,' Amagosa athi
Ngaba Unako Ukufumana iPasipoti Yase-US Ukuba Unayo Imbuyiselo?
Liyiphi Igatya elizimeleyo ngesiNgesi?
IiNgxelo zezeMpilo zaseMelika phantsi kweNgcaciso yokuHlabalaza iHacker
Imbala yePaint Colors ingaba nzima ukukhetha
Isingeniso kumazwe ama-5 eScandinavia
I-Cómo ifumana i-recrutement migratorio e-Estados Unidos
Iindlela ezili-10 zokugubha iNyanga yeMbali yeentsapho
Iimpi zeNapoleonic: uMarshal Jean-Baptiste Bernadotte
Inkcazo yoqoqosho lwe-US
IiLwimi eziZodwa eziNinzi
Indlela Yokungena kwi-C # Nge-Log4net
I-Hub yezoNzululwazi ngezeNtlalontle kwiRace and Racism
Igalari yezithombe zamaTat Tattoos
UYesu Uhlaziya Isiqhwithi - Mateyu 14: 32-33
Iimfazwe zasePheresiya: iMfazwe yaseSalamis
Yintoni iCawa yeGaudete?
Top 10 Blink-182 Iingoma
I-Rowan University Admissions Facts